July 2015 - Myanmar News Plus
အစားအစာ ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစားခြင်းဟာ အချိန်ကြာကြာ ဗိုက်ပြည့်နေတယ်လို့ ခံစားရစေနိုင်
ဒီစာတွေဖတ်ပြီးရင်တော့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမေဆုံးမ တာ မှန်ပါလားလို့ သင်ပြန်တွေးမိသွားပါလိမ့်မယ်။ သုတေသနတစ်ခုက တွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ အစားအစာ ကို ဖြည်းဖြည်းစားသုံးသူတွေဟာ အစားအစာကို မြန်ဆန်စွာ စားသုံးသူတွေထက် အချိန်ကြာကြာ ဗိုက်ပြည့်နေတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြီးခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုကနေ သိရှိခဲ့တာကတော့ အစားအစာ ကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစားသုံးသူတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ် သိပ်သည်းမှု နည်းပါးကြတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြည်းဖြည်းချင်း အစာ စားခြင်းဟာ သင့်ကို ပိန်သေးသွယ်လျ စေတယ် ဆိုရင်တော့ သင်ကိုယ်တိုင် နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့ အစာစားရင် ဘယ်လောက်မြန်မြန် စားတယ်ဆိုတာဟာ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လောက် ဗိုက်ဆာနေတယ်ဆိုတာ နဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာ လေ့လာကြည့်ဖို့အတွက် Bristol တက္ကသိုလ်က […]
ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ကုမ္မဏီ ဖြစ်တဲ့ Google ဟာ အင်တာနက် ရှာဖွေရေးတွေ အပြင် အခြားနယ်ပယ် အချို့ကိုလည်း ဖြန့်ကျက်ဖို့ ကြိုးစားလာတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း The Information ဆိုတဲ့ သတင်းဌာနက အခိုင်အမာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းကတော့ Google ဟာ Fast Food စီးပွားရေးနယ်ပယ် ထဲဝင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ သတင်း တစ်ခုပါ။ သတင်းတွေအရတော့ Google ဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကို အခြေခံပြီး အသားနဲ့ ချိစ် တို့ပါဝင်တဲ့ ဟမ်ဘာဂါ အစားအသောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ နဲ့ သန်း ၃၀၀ ကြားမှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံတော့မယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကို […]
မိမိတို့နေစဉ် စားသောက်နေကြတဲ့ အစားအစားတွေထဲမှာ အာဟာရကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဓါတ်များ ပါဝင်နေသလို ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာများလည်း ပါဝင်နေကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် မိမ်ိတို့မြန်မာလူမျိုးတွေ နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးနေကြတဲ့ အီကြာကွေးထဲကို ကြွတ်ရွနေအောင် ကျောက်ကျဉ်တို့လို၊ ဆိုဒါတို့လိုဟာတွေ ထည့်ထားသည့်အတွက် Aluminum ဓါတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ၄င်းအလူမီနမ်ဓါတ်ဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်များကို သေစေနိုင်ပြီး မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့စေသလို လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လည်း ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်စေပါတယ်။ ၄င်းအလူမီနမ်ဓါတ်ကိုခြေဖျက်ပေးနိုင်တာက ပဲနို့ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားမှာ ပဲနို့နဲ့အီကြာကွေးကို အမြဲ တွဲရောင်းပေးလေ့ရှိကြတယ်။ မိမိတို့မြန်လူမျိုးများ နှစ်ခြိုက်စွာ စားသုံးနေကြသည့် ငပိရည်နှင့်တို့စရာတွေထဲမှ အချဉ်ဖောက်ထားသည့် ကတက်ချဉ်၊ မုန်လာချဉ်၊ မုန်ညင်းချဉ်၊ သရက်ချဉ်စတဲ့ ချဉ်ဖတ်အမျိုးမျိုးဟာ အူမကြီးကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာစတဲ့ရောဂါများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဓါတ်တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဲဒီအချဉ်ဖောက်ထားတဲ့ဓါတ်ကို ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်တာက ကီဝီသီးတို့လို ဗီတာမင်စီပြည့်ဝတဲ့ […]
ညအိပ်ချိန် သင့်အနီးအနားမှာ ဖုန်းအားသွင်းပြီး အိပ်ခြင်းဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို တက်စေ
စပိန် သိပ္ပံပညာရှင်တွေက လက်ကိုင်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွေနဲ့ Laptop စတာတွေရဲ့မျက်နှာပြင်ကနေ ထုတ်လွှတ်တဲ့ အလင်းရောင်တွေဟာ အဝလွန်မှုကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဟောမုန်းထုတ်လုပ်မှုကို တားဆီးတဲ့အကြောင်း ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အပင်တွေ၊ တိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ လူတွေမှာ ရှိတဲ့ အသားအရောင် ပြောင်းလဲစေတဲ့ ဟော်မုန်းဓာတ်ကြောင့် အိပ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန် ကန့်သတ် ထိန်းချုပ်ပေးပြီး အစာချေဖျက်မှုကိုလည်း မြင့်တက်စေပါတယ်တဲ့။ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပြီး အိပ်မယ်ဆိုရင် ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အစာချေဖျက်မှု စနစ်ကို နှေးကွးစေတဲ့အပြင် အလေးချိန်သိသိသာသာ တက်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက် သဘာဝမဟုတ်တဲ့ အလင်းရောင်ဟာ အစာချေဖျက်မှု စနစ်လည်ပတ်မှု နှေးကွေးလျော့နည်းစေပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်သွေးသား လည်ပတ်မှု သိပ်အလုပ် မလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိုးရိမ်တကြီးဖြစ်နေဖို့တော့ မလိုပါဘူး။ အားသွင်းထားသည်ပဲဖြစ်စေ၊ မသွင်းထားသည်ပဲဖြစ်စေ ဖုန်းကိုအသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာ ပါဝါပိတ်ထားလိုက်ရင် […]
ပြည့်စုံတဲ့စာများကို ဆရာများထံမှ ရှာဖွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်(Share လုပ်ဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော်) << အမေးများသောမေးခွန်းများ >> (1)-. ကျနော်သားအတွက် အရပ်ရှည်စေခြင်လို့ လမ်းညွှန်မှုလေးပေးပါခင်ဗျား၊ကလေးက အသက် ၁ဝ နှစ် ပြည့်ပါတော့မယ်၊ဆေးအနေနဲ့ ဘယ်လိုအမျိုးစားတွေနဲ့ အထောက်ကူဖြစ်နိုင်ပါသလဲခင်ဗျ၊.စားဆေး၊ ထိုးဆေး ရှိတယ်လို့ ကြားလို့ပါ။ .ကလေးရဲ့ ယခုအရပ်အမြင့်က ၄’-၂” ပါ၊ ဖခင် 5′-၄”၊ မိခင် 5′-၁” ရှိပါတယ်၊ မျိုးရိုးကတော့ အရပ်အရမ်းမနှိမ့်ပါ။.ကလေးရဲ့နှစ်ဖက်အဖိုး၂ ယောက်လုံး ဖခင်ထက်အရပ်ရှည်ကြပြီး၊အဖွား၂ယောက်လုံးလဲ မိခင်ထက် အရပ်ရှည်ကြပါသည်၊ ကျနော်တို့ ၂ ယောက်သာပုနေသောကြောင့်၊ ကလေးလဲ အရပ်ပုမှာကြောက်လို့ ကူညီလမ်းပြပေးပါခင်ဗျ၊အသက်တူကလေးများနဲ့ ယှဉ်လျှင်ပုနေပါသည်၊ကျန်းမာရေးကောင်းပါသည်၊ အရပ်အမြင့် ၄’-၂”၊ လက်ရှိပါင်ချိန် ၆၈-၇ဝ ပါ၊.(2.)- မင်္ဂလာပါ ဒေါက်တာ။ ကျနော့်သမီးက ၁၆ နှစ်ပါ။အရပ်က ၅ […]
ကြုံဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေရင် အခြားသောသူများကိုအားနာရသလို အခြားသူများဖြစ်နေရင်လည်း ကိုယ့်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ခြေထောက်အနံ့ဖြစ်ပေါ်ရခြင်း အကြောင်းကတော့ ခြေထောက်ဆီထွက်များသူများ အဓိကအဖြစ်များပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြေထောက်ကထွက်တဲ့ဆီ ဖိနပ်ရေစိုခြင်း တို့ကြောင့် ဘက်တီးရီးယားများပေါက်ဖွားပြီး ခြေထောက်အနံ့ဆိုးများဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာကတော့ ပန်းသီးရှာလကာရည် ၊ ခြေထောက်စိမ်ဖို့ ဇလုံတစ်လုံး ၊ ရေနွေး တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇလုံထဲကို ရေနွေးနွေး(ခြေထောက်စိမ်လျင်ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပူချိန်) ၄လီတာ ထည့်ပါ။ ပန်းသီးရှာလကာရည် ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဝက် ကိုရေနွေးထဲထည့် ပြီးသေချာမွှေပါ။ ထို့နောက် ခြေထောက်ကို ၁၅မိနစ်ခန့်စိမ်ထားပါ။ ခြေထောက်အနံ့ပြင်းသူများ တစ်ရက်ခြား ၃ကြိမ် မှ ၄ကြိမ်လုပ်ပါ။ ၅ကြိမ်ထက်ပိုလုပ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ သာမာန်လောက်ဆိုရင် တစ်ကြိမ်နဲ့တင် အမြစ်ပြတ်ပျောက်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ခြေထောက်အနံ့ဆိုးစဉ်က ၀တ်ဆင်ထားသောဖိနပ်များ ခြေအိတ်များအားပြန်မ၀တ်မိဖို့တော့လိုပါတယ်။ အားလုံးအသစ်ပြန်ဝယ်လိုက်ပါ။ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ကို စိန်သန်း
အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝ
အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ တစ်ခါတစ်လေ ငွေများများ ရအောင် ရှာနိုင်သူထက် သူတို့ ဘဝကို ပျော်အောင် ထားနိုင်တဲ့ သူကိုပဲ နှစ်သက်ကြတယ်။ တစ်စုံတစ်ခု ဆိုရင် ပါးစပ်ကနေ မပြောပြဘဲနဲ့ သိုဝှက်ထားလေ့ ရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ခါ ကြတော့ ပါးစပ်ကနေ တစ်ဖွဖွ စကားများ တတ်ကြသူတွေပေါ့။ စိုးရိမ်စိတ် လွန်ကဲကြသူတွေထဲမှာလည်း သူတို့အပြင် နှစ်ယောက် မရှိဘူးလေ။ သို့ပေမယ့် ပျော်ရွှင်မူကို လိုလားပြီး ဘဝကို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းလိုကြတယ်။ အနုအရွ အလှအပတွေကို ကြိုက်တတ်ပေမယ့်လည်း ဘဝ ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ကြုံရချိန် ရောက်ရင်တော့ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ သတ္တိတွေလည်း သူတို့မှာ အပြည့်ရှိပါတယ်။ ပြုစု ယုယတာကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပေမယ့် သူတို့ ကိုယ်တိုင်လည်း အပြုအစု အချော့ […]
ပိုလေးတဲ့ ဇွန်းခက်ရင်းတွေက အစားအသောက်ကို ပိုအရသာရှိစေ
ပိုလေးတဲ့ ဇွန်းခက်ရင်းတွေနဲ့ စားခြင်းက အစာရဲ့အရသာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်လို့ သုတေသီတွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်းခက်ရင်းရဲ့ အလေးချိန်နဲ့ အစာအပေါ် လူတွေနှစ်ခြိုက်မှု အကြားက တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်မှု ကို လေ့လာရှာဖွေမှုပြုခဲ့တာပါ။ ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ညစာပေါင်း ၁၃၀နဲ့အထက်ကို လေ့လာမှုပြုခဲ့ချက်တွေအရ၊ အစားအစာ တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ အရည်အသွေးနိမ့် ဇွန်းခက်ရင်းတွေနဲ့ စားတာထက် အရည်အသွေးမြင့် ဇွန်းခက်ရင်းနဲ့စားတဲ့ သူတွေဟာ အစားအသောက် တန်ဖိုးထက် ၁၅ရာခိုင်နှုန်းကို အပိုပေးဖို့ လိုလိုလားလား ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကို အောက်စ်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပိုမိုလေးလံတဲ့ ဇွန်းခက်ရင်းတွေနဲ့ စားရင် အရသာ ပိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ “ဇွန်းခက်ရင်းတွေရဲ့ အပြုသဘော ဒါမှမဟုတ် အပျက်သဘော တန်ဖိုးတွေဟာ အစားအသောက်အပေါ် ကျွန်တော်တို့ အကဲဖြတ်မှုဆီကို အကြွင်းမဲ့ ကူးပြောင်းတာပါ။ […]
အွန်လိုင်းမှာ ဆဲဆိုရမ်းကားတတ်တဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ အရှုံးသမားများဖြစ်
အင်တာနက်လူမှုကွန်ယက်တွေပေါ်မှာ အမျိုးသမီးတွေကို ခြိမ်းခြောက်အနှောက်အယှက်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေဟာ လက်တွေ့ဘဝမှာ အရှုံးသမားတွေဖြစ်နေတက်ကြောင်း လေ့လာမှုတစ်ခုက ဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုကို ဝေလတောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ်နဲ့ မိုင်ယာမီ တက္ကသိုလ်က လေ့လာသူနှစ်ဦးက ပူးပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို Halo3 လို့အမည်ရတဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ၁၆၃ ပွဲတိတိကစားစေပြီး ပညာရှင်တွေက လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျွမ်းကျင်မှုနိမ့်ပါးပြီး ပြိုင်ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ အမျိုးသားတွေက ပြိုင်ဘက်အမျိုးသမီးတွေအပေါ် ညစ်ညမ်းတဲ့စကားလုံးတွေသုံးကာ ရမ်းကားလေ့ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အရှုံးသမားအမျိုးသားတွေဟာ ပြိုင်ဘက်ကိုကျား၊ မ မရွေးပဲ ရမ်းကားတာဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေဆို ပိုဆိုးတဲ့အပြုအမူမျိုးလုပ်တက်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့်နဲ့ ကစားနိုင်တဲ့အမျိုးသားတွေကတော့ ဒီလိုအပြုအမူမျိုးလုပ်တာ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ ဂိမ်းပြိုင်ပွဲဟာ တကယ့်လူ့ဘဝနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေတဲ့အတွက် ဒါကိုအခြေခံပြီး လူတစ်ဦးရဲ့ဗီဇကို လေ့လာတာဖြစ်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ အမျိုးသားအများစုက ပြင်ပဘဝမှာ ရှုံးနိမ့်မှုများလေလေ […]